> Resource> iPod> wepụ Music si iPod ka Computer / iTunes Library
M na-eche ma ọ bụrụ na e nwere otu omume ma ọ bụ a ụzọ wepụ niile songs si gị iPod gị na kọmputa. M chọrọ reformat kọmputa m ma m na-achọghị ka na-aga site hassle nke na-ere ọkụ m niile songs. Ọ bụrụ na unu wepụ MP3s-si gị iPod gị na kọmputa, ka ọ na-eme ụda àgwà n'ụzọ ọ bụla?
Chọrọ wepụ music si iPod na kọmputa mgbe enwe a kọmputa okuku ma ọ bụ reformat? Ida iTunes Ọbá akwụkwọ na-ekpebi wughachi ya site adịrị music on iPod na ya? Ihe niile a pụrụ ime mgbe i nwere nke a iPod na kọmputa transfer ngwá ọrụ - Wondershare TunesGo (Windows). The omume ọma e ngwá ọrụ na-enye gị ohere iji massively wepụ music na gị iPod na kọmputa na-iTunes.
Ọ bụrụ na ị na-ekpebi wepụ music si iPod ka Mac, biko atụgharị Wondershare TunesGo (Mac). Ọ na-enye gị ka ị na wepụ niile ma ọ bụ họrọ songs ka Mac gụnyere iTunes on Mac-enweghị a ikedo.
Ibudata ngwá ọrụ a na-agbalị adịrị music si iPod na kọmputa & iTunes.
Wụnye nri mbipute a ngwá ọrụ na kọmputa gị. Ebe a, m ga-na-windows version dị ka ihe atụ.
Cheta na: Na Wondeshare TunesGo, ị nwere ike wepụ music si iPod ụdị, sịnụ, iPod aka, iPod kpochapụwo, iPod ịkpọgharịa na iPod nano na kọmputa na-iTunes. Ma, Mac version anaghị akwado iPod aka 3. Lelee nkọwa banyere ndị nile na-akwado iPod ụdị.
Olee otú wepụ music si iPod na kọmputa / iTunes
Ka malitere, malite ngwá ọrụ a na kọmputa gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-esi a bụ isi window.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod ka Windows kọmputa
Site ịkwụnye n'ime eriri USB na kọmputa, ị nwere ike nweta gị iPod ejikọrọ. Mgbe gị iPod a ghọtara, ọ ga-apụta na isi window.
Nzọụkwụ 2. wepụ music anya iPod ka iTunes na kọmputa
Ke isi window, ngwá ọrụ a na-enye gị a shortcut wepụ music on iPod ka iTunes na kọmputa.
Pịa "Copy iDevice ka iTunes". A dialog egosi elu. Pịa "Malite" na-egosi data i nwere ike wepụ ka iTunes. Dị nnọọ nne Mmetụta Music na listi ọkpụkpọ. Mgbe ahụ, pịa "Detuo na iTunes".
Site na ịpị "Export Music ka nchekwa", i nwere ike wepụ music si iPod na kọmputa.
Wepụ songs si iPod ka iTunes na kọmputa, ị nwekwara ike gbalịa otú a. Na n'aka ekpe ndekọ osisi, pịa "Media" ikpughe music window. Ọ bụrụ na ndị window bụ banyere music, ị nwere ike pịa "Music" n'elu akara na-egosi ya. Mgbe ahụ, họrọ songs na ị ga-amasị wepụ.
Site na ịpị "Export ka", i nwere ike wepụ music anya iPod na-azọpụta ha na kọmputa.
Site na ịpị triangle n'okpuru "Export ka"> "Mbupụ na iTunes Library" ma ọ bụ ịpị "Smart Mbupụ na iTunes", na ị na-enwe ike wepụ music faịlụ ka iTunes.
E bụ obere dị iche n'etiti "Export ka"> "Mbupụ na iTunes Library" na "Smart Mbupụ na iTunes". Mgbe ị pịa "Export ka"> "Mbupụ na iTunes Library", i nwere ike wepụ music on iPod selectively ka iTunes. O nwere ike ka ị wepụ music ugboro ugboro mgbe music on iPod esesịn e na iTunes. Otú ọ dị, mgbe ị pịa "Smart Mbupụ na iTunes", ngwá ọrụ a ga-nyo songs ẹdude ke iTunes na wepụ songs na na iPod.
Na Windows version, na ị na-enwe ike ọbụna wepụ listi ọkpụkpọ iji kọmputa na iTunes. Pịa "Playlist" na-egosi na playlist window. Họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa triangle n'okpuru "Export ka". Na esiri-ala ndepụta, pịa "Mbupụ na My Computer" ma ọ bụ "Mbupụ na iTunes Library" wepụ listi ọkpụkpọ iji iTunes na kọmputa.
Cheta na: The Mac version adịghị ka ị wepụ listi ọkpụkpọ na kọmputa na-iTunes n'ihi na oge ịbụ.
Gbalịa TunesGo na-agbalị otú wepụ music site na iPod ka PC / iTunes.
Otú nyefee Music si iPad ka Computer
iPod File Manager: Jikwaa Music, Videos Photos na ala
Mmekọrịta iPod / iPhone / iPad na gị na Home na Office Computer